Vatorwa vakapambwa nevarume vane pfuti kubva kuhotera yeMexico vakanunurwa nemapurisa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Vatorwa vakapambwa nevarume vane pfuti kubva kuhotera yeMexico vakanunurwa nemapurisa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Cuba Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Haiti Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sekureva kwevakuru veMexico, boka revatorwa rakasanganisira maMexico gumi nevaviri uye vagari vekunze makumi maviri nevaviri, pakati pavo paiva nevana vatatu nemukadzi akazvitakura.
Boka revatorwa vakapambwa kubva kuhotera kuchamhembe kweMexico.
Mapurisa eMexico anozowana vakaurayiwa vari vapenyu uye vakasiiwa nevatapi.
22 MaHaiti nemaCuba vanogona kunge vari kutsvaga hupoteri kana vatorwa.
Boka revane 16 vekuMexico nevaHaiti nevaCuba makumi maviri nevaviri vange vanunurwa mushure mekubiwa kubva kuHotel Sol y Luna muguta reMatehuala, kuchamhembe kweMexico nyika yeSan Luis Potosi.
Muchuchisi mukuru wenyika akazivisa kuti vakaurayiwa vakawanikwa vari vapenyu nemapurisa ehurumende padivi penzira, sezviri pachena vakasiyiwa nevapambi vavo.
Sekureva kweMuchuchisi Federico Garza Herrera, boka iri raisanganisira maMexico gumi nevaviri uye vagari vekunze makumi maviri nevaviri, pakati pavo paiva nevana vatatu nemukadzi akazvitakura.
Izvo hazvina kujeka pakarepo kuti vatorwa ava vaitsvaga hupoteri kana vanoenda.
Pakutanga mishumo yakaratidza kuti vamwe vakatapa vaive veVenzuelan.
VeMexico vanoona nezvekupinda munyika vaiongorora mamiriro avo mu Mekisiko sezvo mapurisa aishanda kuti awane kurudziro yekupamba uku.
Kubiwa kwakaitika pa Matehuala hotera mangwanani Chipiri.
Vachuchisi vakati matatu maSUV akatakura varume vane zvombo akasvika mambakwedza pahotera Sol y Luna ndokutapa vaenzi.
Mamwe magwaro ekuzivisa evakakuvadzwa akawanikwa mukati memakamuri. Vakapamba sezviri pachena vakatorawo danda revaeni rehotera.
Vakapamba vakazoonekwa neNational Guard nemapurisa mumugwagwa kunze kweMatehuala mushure mekunge munhu akafona ati boka revanhu raikumbira rubatsiro mumugwagwa.